Akụkọ - Ihe mmetụta dị na igwe ntinye SMT dị ezigbo mkpa, ọ nwere otu ụdị
Igwe ntinye ego dị ka robot na-akpaghị aka. Omume ya na-ebufe omume ya niile ma werezie isi ụbụrụ na-ekpe ikpe ma na-arụ ọrụ. Colọ ọrụ Topco ga-eso gị kee na igwe ntinye ego nwere ụdị ihe mmetụta ụfọdụ.
1. Mmetụta nrụgide
Igwe ntinye, gụnyere ọtụtụ cylinders na agụụ generators, nwere ụfọdụ chọrọ maka ikuku ikuku. Mgbe achọrọ nrụgide nke akụrụngwa mechara, igwe enweghị ike ịrụ ọrụ ọ bụla, ihe nrụgide nrụgide na-enyocha mgbanwe nrụgide ahụ mgbe niile. Ozugbo ndiiche, ọ ga-eme ngwa ngwa mkpu, Ichetara onye ọrụ obibi ya na oge.
2. Mmetụta nrụgide na-adịghị mma
Ntughari mmiri nke igwe ntinye a na-amusi mmiri site na nsogbu na-adighi nma, nke mejuputara generator (jet generator generator) na ihe nkpuchi. Ọ bụrụ na nrụgide na-adịghị mma ezughị oke, a gaghị enwe ike ịmịpụta ihe ndị ahụ. Mgbe onye na-eri nri enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe ndị ahụ rapaara na akpa ihe ma enweghị ike ịmịkọrọ ya, ihe ntanetụ mmiri agaghị amịkọrọ ihe ndị ahụ. Ọnọdụ ndị a ga-emetụta ọrụ nkịtị nke igwe. Mmetụta nrụgide na-adịghị mma na-enyocha mgbanwe nrụgide na-adịghị mma. Mgbe akụrụngwa enweghị ike ịmịkọrọ ma ọ bụ enweghị ike ịmịkọrọ ya, ọ nwere ike ịme mkpu ngwa ngwa iji chetara onye ọrụ ka ọ dochie feeder ma ọ bụ lelee ma ọ bụrụ na etinyere usoro mmịpụta ahụ nrụgide na-adịghị mma.
3. Ihe onyonyo onyonyo
Ngosipụta nke oge ọrụ ọnọdụ nke igwe ntinye ego na-ebutekarị ihe mmetụta CCD, nke nwere ike ịnakọta akara ngosi onyonyo dị iche iche, gụnyere ọnọdụ nke PCB, nha ngwaọrụ ahụ, na site na nyocha na nhazi kọmputa, ntinye isi nwere ike mezue ọrụ ndozi na nhazi.
4. Ọnọdụ sensọ
Nnyefe na idobe bọọdụ ahụ e biri ebi, gụnyere ịgụta PCBs, nchọpụta oge na-agagharị na ntinye isi na ntinye ọrụ, yana ngagharị nke usoro inyeaka, ihe niile chọrọ siri ike na ọnọdụ ahụ. Ọnọdụ ndị a kwesịrị ịghọta site n'ụdị dị iche iche nke ọnọdụ sensọ.